samedi, 29 décembre 2018 06:51
Tsaratanana: Maty voatifitry ny Zandary i Clodera, jiolahy raindahiny amin'ny fakana an-keriny
Ny marainan'ny zoma 28 desambra, dia nanao sarik'ampandrina ny dahalo raindahiny amin'ny fakana an-keriny aty amin'iny Distrikan'i Tsaratanana, tao Ambatomitsangana, tokony 12 km miala ny renivohitry ny Distrika, ny Zandary fito lahy, notarihin'ny Commandant de Compagnie sy ny lefiny ary ny Commandant de Brigade Tsaratanana ary Zandary roalahy.
Tratra tao ny dahalo iray efa nokarohina ela atao hoe: Clodera, tovolahy tokony ho 22 taona. Sarona niaraka taminy tao ihany koa ny basy vita gasy sy sarontava fanaony amin'ny fakana an-keriny, mohara sy ny basy iray FC an'ny rainy fa ampiasainy.
samedi, 29 décembre 2018 05:04
Halabato : Aoka hiaran'ny ny sazy izay nanao izany na iza na iza.
Hatramin'izay dia mitanisa fotsiny ny biraom-pifidianana nofoanana, misy safidin'olona amin'arivony nofoanana noho ny halabato.
Hatreto tsy re mihitsy hoe natao aiza ireo mpangala-bato, mba nisy sazy ve ? Sa dia mitovy amin'ny mpangalatra taolapaty sy lakolosy, basy, kidnapping, halatr'omby, tsy mety hita ny atidoha nikotrika ?
Raha tena tianareo ry CENI, ry HCC ny ametrahana fitokisana aminareo, dia ataovy ny plainte pénale an'ireny membre bureau de vote, ireny nanao hosoka liste électorale, hosoka carte électorale, hosoka karapanondro, hosoka bureau de vote fictif, hosoka bulletin unique, hosoka affiche sy ny hosoka marobe ireny.